Ny vata fampangatsiahana ara-barotra amin'ny ankapobeny dia mizara ho sokajy telo: vata fampangatsiahana ara-barotra, vata fampangatsiahana ara-barotra, ary vata fampangatsiahana ao an-dakozia, izay misy eo anelanelan'ny 20L ka hatramin'ny 2000L. Ny mari-pana ao amin'ny vata fampangatsiahana varotra dia 0-10 degre, izay be mpampiasa amin'ny fitehirizana sy fivarotana ny zava-pisotro isan-karazany, vokatra vita amin'ny ronono, voankazo, legioma ary ronono. Araka ny fomba fanokafana ny varavarana, dia mizara ho karazana mitsangana, karazana fanokafana ambony ary karazana tranga misokatra. Ny vata fampangatsiahana mitsangana dia mizara ho varavarana tokana, varavarana roa, varavarana telo, ary Ny varavarana misokatra dia manana endrika barika, endrika toradroa. Ny karazana lambam-baravarankely dia misy karazana fampisehoana roa eo alohan'ilay fampiroboroboana an-tampon'ny trano. Ny tsena anatiny dia anjakan'ny seho ara-barotra mijoro, izay mahatratra 90% ny totalin'ny tsena rehetra. .
Ny vata fampangatsiahana ara-barotra dia vokatry ny harinkarenan'ny tsena, izay niova ho fivoarana sy fitomboan'ny zava-pisotro lehibe, gilasy ary mpanamboatra sakafo be hatetika. Mitombo hatrany ny refin'ny tsena ary mizara tsikelikely ny endrika vokatra. ny fampiroboroboana ny entam-barotra ho an'ny mpanjifa haingana dia nanjary fampandrosoana sy lisitry ny vata fampangatsiahana varotra. Noho ny fisehoana an-tsaina kokoa, ny mari-pahaizana fitahirizana matihanina bebe kokoa, ary ny fampiasana mora kokoa, ny haben'ny tsenan'ny vata fampangatsiahana ara-barotra dia mivelatra haingana. Ny tsenan'ny vata fampangatsiahana ara-barotra dia matetika misy ny tsenan'ny mpanjifa lehibe ao amin'ny indostria sy ny tsenan'ny mpanjifa miparitaka. Anisan'ireny, ny Ny mpamokatra vata fampangatsiahana dia manarona ny tsenan'ny mpanjifa amin'ny indostria amin'ny varotra mivantana ny orinasa. Ny tanjon'ny fividianana vata fampangatsiahana varotra dia voafaritra amin'ny alàlan'ny fanoloran-tenan'ny mpanjifa lehibe amin'ny indostrian'ny zava-pisotro sy gilasy isan-taona. Ao amin'ny tsenan'ireo mpanjifa miparitaka dia miankina amin'ny fandrakofan'ny mpivarotra izany. .
Hatramin'ny nipoahan'ny COVID-19 dia nampitombo ny mpanjifa ny fanangonana sakafo sy zava-pisotro, izay nahatonga ny fitomboan'ny fangatahana vata fampangatsiahana tratra sy fisehoana zava-pisotro madinidinika, ary nahatratra vokatra tsara ny tsena an-tserasera. , ny tsena dia nametraka fepetra vaovao momba ny fomba fanaraha-maso ny mari-pana sy ny fampisehoana ny vata fampangatsiahana. Noho izany dia mihombo hatrany ny vata fampangatsiahana miaraka amin'ny takelaka fanaraha-maso ny solosaina, izay tsy afaka mahafeno ny filan'ny mpanjifa fotsiny amin'ny fampisehoana ny mari-pana, fa manome ny teknolojia bebe kokoa ho an'ilay hetsika.
Tamin'ny fihanaky ny COVID-19 farany teo, dia voadona mafy ireo mpamatsy sinoa. Na izany aza, amin'ny fotoana maharitra sy maharitra dia miharatsy hatrany ny COVID-19 any ivelany, izay nahatonga ny mpanjifa hijanona ao an-trano, ary ny fangatahan'izy ireo amin'ny Nitombo ihany koa ny kojakojan-tokantrano sy ny vata fampangatsiahana. Amin'ny maha-ampahany manan-danja amin'ny laharam-pamokarana manerantany, dia nitazona toe-tsaina feno fanantenana sy tsara foana i Shina. Nandritra ny fotoana iray, ny indostrian'ny vata fampangatsiahana varotra dia nanohy ny firoboroboan'ny fandrosoana sy ny fitoniana maharitra. Mandritra izany fotoana izany, ny fampandrosoana ara-toekarena ao amin'ny firenena, ny fanavaozana ny fangatahan'ny mpanjifa ary ny fanohanana matanjaka ny politika, hametraka fototra mafy ho an'ny indostrian'ny vata fampangatsiahana raharaham-barotra hitazomana ny fitoniana sy ny fanatsarana.